Shaqadii Wasiir katirsan Xukuumada uu la wareegay R/Wasaare Rooble - Banaadisom
Home Wararka Maanta Shaqadii Wasiir katirsan Xukuumada uu la wareegay R/Wasaare Rooble
Shaqadii Wasiir katirsan Xukuumada uu la wareegay R/Wasaare Rooble
Wasiirka wasaaradda arrimaha guduha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jeneraal; Muqtaar Xuseen Afrax ayaa Magaalada Baladweyne kulan kula qaatay qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Gobolka Hiiraan.
Wasiirka iyo Odayaasha ayaa ka wada hadlay sidii loo dar-dar gelin lahaa nabad gelyada Gobolka iyo arrimaha dib u heshiisiinta bulshada halkaasi ku dhaqan.
Qaar ka mid ah Odayaasha oo shirkaasi ka hadlay ayaa aad usoo dhoweeyay howlaha dib u heshiisiinta ee ay Dowladda Federaalka ka waddo Gobolka Hiiraan.
Inta badan Shaqadii Wasiir Afrax waxaa la wareegay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaas oo looga fadhiyey Arinta Doorashada hirgelinteeda inuu doorkiisa qaato iyo soo dumida dhinacyada Mucaaradka.
Wasiirkani ayaa tan iyo 19-kii October 2020-kii markii la magacaabay waxa uu ku mashquulay welina xal ka keenin dagaalka General Abuukar Xuud oo diidmo cad kala hor yimid Doorashadii Madaxda HirShabelle Bishii November.
Previous articleDF oo laba shuruud ku xirtay dibad-baxa mucaaradka